မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): အသံဖမ်းတဲ့ဆော့ဝဲ(အရမ်းကောင်းတာက အချိန်ဇယားနဲ့ဖမ်းလို့ ရပါတယ် )
အသံဖမ်းတဲ့ဆော့ဝဲ(အရမ်းကောင်းတာက အချိန်ဇယားနဲ့ဖမ်းလို့ ရပါတယ် )
ဒီဆော့ဝဲလေးက ဖုန်းမှာထဲ့ထားရင် အသံဖမ်းစက်လိုပဲ အင်တာဗျူးတွေ လုပ်တဲ့အခါ
သုံးလို့ ရပါတယ် ။ ဖမ်းထားတဲ့အသံလည်း ကြည်လင်ပြတ်သားပါတယ် ။ထူးခြားမှုက
အချိန်ဇယား နဲ့လုပ်လို့ ရတယ် ။ ဖုန်းမှာ နှိုးစက်ပေးသလိုမျိုး လုပ်ထားလို့ ရပါတယ်
အဲ့တော့ အခန်းထဲ ဖုန်းထားခဲ့ပီး အတင်းပြောမပြော စစ်လို့ တောင်ရသေးတယ်
ဒီဆော့ဝဲက အချိန်ဇယားဆိုတော့ ဥာဏ်ရှိသလိုသုံးကြည့် ။တကယ် မိုက်တယ်.....။
ဒီလင့်မှာယူပါ - www.mediafire.com-အသံဖမ်းဆော့ဝဲ
Author Anonymous at 3:33:00 AM
Labels: Phone အတွက် အသံဖမ်းဆော့ဝဲ
Aung Myat Thu said...
please send aungmthu1986@gmail.com
myatnothukokott1@gmail.com ကို ကျေးဇူးပြုပြီး ပို့ပေးပါနော်... ပြီးတော့ call recorder ကောင်းတာလေးတွေရှိရင် ရှိသလောက်သာ ပို့ပေးပါဗျာ...ကျွန်တော့်ဖုန်းက call recorder (၂)မျိုးထည့် စမ်းပြီးပြီဗျ..အဆင်မပြေလို့...သူ့ဘက်က ပြောတာကို ကြားရတယ်...ကျွန်တော့်ဘက်က ပြန်ပြောရင် မကြားရဘူးဖြစ်ဖြစ်နေလို့...
thi hakyaw said...
tun1303@gmail.com,,,,,,,pls sent to me
Please send to septemberhnin11@gmail.com.
Shadowless Ninjia said...
Aung Bobo said...
ကိုမျိုး ( မိုးညှင်း ) said...
Win Maung said...
Play google is not used.Please sent to me
Pho Htaung said...
I can' get it.pls sent sosph7@gmail.com
lonely.saturn@gmail.com.... Pls Sent me...... Thx.....
jeh haung hwang said...
Shinemin Han said...
me too bro...............
shineminhan@gmail.com how can i get google play store.? plz
bjbj.bjjay@gmail.com ကိုပို့ပေးပါဦးနော် အကို-ကျေးဇူးပါ
ko wi said...
ashinwimala.myaing@gmail.com ကို ပို့ပေးပါနော ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။
Myint Naing said...
pls: send ayemin.ayemin@gmail.coml
kyaw mintunn said...
mintunn.2010@gmail.com ကျနော်ကိုလည်း ပေးအူံးနော်။
aung kyaw soe said...
aung mon swe said...
would you send it to my e-mail : uams.unenglish @gmail.com? thanks
mptphyowai@gmail.com ကို ပို့ပေးပါဦးနော်..ကျနော်စောင့်နေမယ်နော်...